သငျသညျမွမ်းမံချင်ပါတယ်ဘယ် add-ons တွေကို?
မေးခွန်း သငျသညျမွမ်းမံချင်ပါတယ်ဘယ် add-ons တွေကို?
2 နှစ်ပေါင်း 8 months ago #614 by rikoooo
ကျွန်မလက်ရှိအနည်းငယ် update လုပ်ဖို့သွားမယ်အဖြစ်ငါသည်သင့်ကိုအများအားဖြင့်မွမ်းမံချင် add-ons တွေကိုရသောသိရန်ဤသတင်းစကားကိုပို့စ်တင်တာ, သင်သည်အလွန်သင်အရှိဆုံးချင်ရာထွက်ရှာတွေ့မှအကြှနျုပျကိုကကူညီလိမ့်မည်။
သငျသညျငါ့ကိုလည်း (အခြား website ကနေ) တစ်ခု updated ဗားရှင်းလင့်ခ်ပေးနိုင်လျှင်လမ်းဖြင့်, ကစိတ်ကူးပါလိမ့်မယ်။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: Gh0stRider203, Jodsalz1, ပူဖောင်း @ သိုး
2 နှစ်ပေါင်း 8 months ago #615 by Dariussssss
OK ကိုပထမဦးဆုံးအပေါင်းတို့၏အချို့သောအမှားများကို ...
A320 ကျိကျိတက် Pack ကို, crashing စောင့်ရှောက်။ ဒါဟာငါ့အပေါ်အလွန်မတည်မငြိမ်င် FSXအဘယ်ကြောင့်မသိရပါဘူး။
သောမတ်စ်ရုသသည် A330 / 340, PFD မှာအားလုံး ... တင်းကုပ်နှင့် overspeed နှစ်ဦးစလုံးဖေါ်ပြခြင်းမပေးပါ။
စော်ဘွားစင်းကိုအလွန်ဆိုးရွား FPS, ငါ့ပျက်သွားတာ FSX...
ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား updates များကို ...
ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်တစ်နည်းနည်းနဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရာလေယာဉ်မှူးအခန်းပေါင်းစည်းဖို့ပိုပြီးတိကျစွာသည် A330, Mega Pack ကိုအတူ TR အားဖြင့် A340 / 320 ပေါင်းစည်းဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ်။
A380, တူညီသောအရာ, PFD တင်းကုပ်နှင့် overspeed နှစ်ဦးစလုံးဖေါ်ပြခြင်းမပေးပါ။
2 နှစ်ပေါင်း 8 months ago #616 by Gh0stRider203
Dariussssss, သောသူအပေါင်းတို့သည်အလွန်လွယ်ကူသောပြင်ဆင်ချက်င် !!!
1) သင့်အဲယားဘတ်စ်လေယာဉ်တင် Uninstall;
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: denpic
2 နှစ်ပေါင်း 8 months ago #617 by D115
ငါအနာဂတ်အတွက်အရည်အသွေးအ VC ကိုတစ်ချိန်ချိန်အတူဘိုးအင်း 757 ကြည့်ဖို့ကိုချစ်မယ်။ အဆိုပါ 757 ခြေထားပြီးငါထင် FSX တော်တော်ကောင်းကောင်း။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: ပူဖောင်း @ သိုး
2 နှစ်ပေါင်း 8 months ago #619 by Gh0stRider203
D115 wrote: ငါအနာဂတ်အတွက်အရည်အသွေးအ VC ကိုတစ်ချိန်ချိန်အတူဘိုးအင်း 757 ကြည့်ဖို့ကိုချစ်မယ်။ အဆိုပါ 757 ခြေထားပြီးငါထင် FSX တော်တော်ကောင်းကောင်း။
သင် $ ဖြုန်းဖို့ဆန္ဒရှိနေလျှင်, အရည်အသွေး Wings 757 မျှမျှတတလျောက်ပတ်ဖြစ်ပါသည်
2 နှစ်ပေါင်း 8 months ago #649 by julian1245
အဆိုပါလေယာဉ်အချို့သူတို့သည် #realism လှည့်ကြသည်မဟုတ်သည့်အခါကပဲဒါမကောင်းတဲ့ကြည့်ကြောင့်အင်ဂျင်လည်အောင်
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #669 by macca22au
ရန်အဖြစ်အများအပြား updated P3Dလုံးဝဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်အတည်ပြုပြီးသောအခါကျေးရွာကော်မတီများအဖြစ်4။
ဒါပေမယ့်အဖြစ်မကြာမီရေးသားသူနှစ်သက်အဖြစ် v4 အဆိုပါ A320 နှင့် B737-800 ဖို့ကို update ......
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #671 by jakedertree
ငါအဲယားဘတ်စ် A400M များအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ VC ကိုကိုချစ်ချင်ပါတယ်။ ရေးသားသူမြေပြင်ပေါ်မှာအပြည့်အဝလက်ကလျော့နည်းစေရန်အချို့သောညွှန်ကြားချက်များကိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကလည်း, ကြောင်းကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ က hard ဝေးပြေး, ငါမဟုတ်နိုင် (နှင့်မသိရပါဘူး) တက္ကစီစဉ်အတွင်းအင်ဂျင်ထွက် mellow တစ်လမ်းကိုရှာပါ။
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #673 by sergiozaki
ဘိုးအင်း 777 pls များအတွက် P3D v3 / v4
အပြည့်အဝအလုပ်မလုပ် VC ကို panel ကို plss ...
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #674 by sergiozaki
အဆိုပါ A380 P3D v3 / v4
gauge ပြား, 380 ၏အစစ်အမှန် VC ကို
0.340 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်